Xiddigii uu Madaxa ka jabiyay Gary Cahill oo ciyaaraha isaga fariistay isagoo 26-jir ah!!! – Gool FM
Xiddigii uu Madaxa ka jabiyay Gary Cahill oo ciyaaraha isaga fariistay isagoo 26-jir ah!!!
(England) 13 Feb 2018. Xiddiga reer England Ryan Mason ayaa lagu qasbay inuu isaga fariisto ciyaaraha isagoo 26-jir ah uun kaddib markii uu dhaawac daran ka soo gaaray kulan uu kaga horyimid Chelsea.
Xiddiga qadka dhexe ee Hull City ayaa 22 kii Janaayo ee 2017 ka jabay lafta madaxa ku dahaaran kaddib markii ay madaxa isku dhufsadeen Gary Cahill waxaana isla markiiba loola cararay isbital si loogu sameeyo qaliin lagu bad baadinayo.
Dakhaatiirta ugu sarreysa ee qalliinka Maskaxda ayaa kula taliyay 26 jirka inuu kabaha laalo haddii uu caafimaadkiisa ka fikirayo.
Inkastoo laacibkii hore ee Tottenham Ryan Mason uu dadaal xoogan u galay sidii uu dib ugu soo laaban lahaa garoomada misane wuxuu iminka qiray inuusan lahayn Dooq kale oo aan ka ahayn inuu ciyaaraha isaga fariisto.
Mason ayaa bishii December loo dhalay canugiisii ugu horreeyay oo loo bixiyay George.
Aqbaartan naxdinta leh ayaa waxaa markii ugu horreysa saakay xaqiijisay naadiga Hull City oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in xiddigeedii qadka dhexe uu ka fariistay ciyaaraha sababo caafimaad.
Lacazette oo muddo ka maqnaanaya Arsenal kadib qaliin dag dag ah oo lagu sameeyay laacibka
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane kulanka PSG? (Wixii ugu muhiimsanaa ee uu uga hadlay shirka jaraa'id ee ka hor kulanka)